စိတ်ညစ်နေလား..သူငယ်ချင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စိတ်ညစ်နေလား..သူငယ်ချင်း
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Jul 8, 2011 in Copy/Paste | 16 comments
မင်းစိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုလို့ ငါစာရေးလိုက်ပါတယ် ။
လူတိုင်းမှာခံစားချက် အမှတ်တရဆိုတာတွေ ကိုယ်စီရှိတတ်ကြတယ် ။
မင်းမှာလည်းရှိမှာပဲ ။ မခံစားနဲ့လို့ မပြောချင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်
အလုပ်တာဝန် နဲ့ ဘ၀ရဲ့ဝတ္တရားတွေကိုမေ့လျော့ ပျက်ကွက်တဲ့အထိတော့
သတိရတာက ရပါ ။ သတိနည်းနည်းတော့ ထားစေချင်ပါတယ် ။
သီချင်းနားထောင်တာတို့ ၊ အသံအရမ်းဆူညံပြီး ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့သီချင်းတွေကို
ဆိုပစ်လိုက်တာတို့ လုပ်တတ်ကြတယ် ၊တစ်ချိုကတော့ ပန်းချီဆွဲတယ်
ဘယ်လိုပဲ အနုနည်း အကြမ်းနည်းတွေနဲ့ ကုစားကုစား စိတ်ထဲက ဒဏ်ရာ ဒါမှမဟုတ်
အမှတ်ရစရာလေးတွေကတော့ အမြစ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ဒါလေးတွေလုပ်နေတုန်းခဏ
တော့ မေ့သွားသလိုလိုရှိတယ်။နောက်တော့ပြန်သတိရလာတာပဲလေ ။ခဏပဲသက်သာတော့
တစ်ချို့က တိုင်ပင်ဖေါ်သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေထားပြီးရင်ဖွင့်တတ်ကြသေးတယ် …
ဒါလဲ မကောင်းသေးဘူး ….
သူက ကိုယ်အနားမှာဘယ်လောက်ရှိပေးနေနိုင်မှာလည်း… သူမရှိတဲ့အချိန်
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ဘာလုပ်ရမလဲ…. စဉ်းစားပါနော်…..
တကယ်တမ်းကိုယ်နဲ့ အမြဲရှိနေနိုင်တာက ကိုယ့်စိတ်ပဲရှိတယ်…။
…..တကယ်တမ်းဖြစ်လာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအားကိုကြရတာပါ .. ဘယ်သူမှ
ဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်လေးချမ်းသာဖို့ကို ကိုယ့်အားကိုယ်မကိုးပဲ
မကင်းသေးတဲ့လူ ဖြစ်နေမှာအမှန်ပဲ သှူု့ဒုက္ခနဲ့သူရှိနေတဲ့လူက သူတပါးကိစ္စကို
အပေါ်ယံလောက်ပဲရမယ် … နွံအိုင်ထဲမှာနစ်နေတဲ့သူအချင်းချင်း နင့်ကိုငါ
စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကိုအချိန်ဆွဲချင် သေးလား…. ရင်ဝ ကိုမြားမှန်တာကို
ဘယ်သူပစ်လဲ အရင်ရှာရမှာလား …? မြားဒဏ်ရာကို ဆေးကုမှာလာ ……?
သေချာစဉ်းစားနော်…….. စိတ်ချမ်းသာမယ့်အချိန်ဆိုတာ အခုပါ………..
မနက်ဖြန်မှ မဟုတ်ဘူး ..
နောက်နေ့မှမဟုတ်ဘူး… အခု လက်ရှိအချိန် မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ …..
( နည်းကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ် )
တစ်ယောက်ယောက်ကို သတိရတာနဲ့ အဲဒီသတိရတဲ့ စိတ်ကလေး ကို အပြစ်မတင်ပဲ၊
မေ့ပစ်ဖို့မကြိုးစားပဲ သတိရနေတဲ့စိတ်ကလေးကို သေသေချုာချာ
ဂရုစိုက်ပြီးကြည့်နေပါ ။ အဲဒီစိတ်ကလေးက အမြဲတမ်း
ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို တွေလာလိမ့်မယ် ။ပျောက်သွားလိုက်
ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့ အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေရလိမ့်မယ် ။မင်း လုပ်ရမှာ က
သတိရတဲ့စိတ်လေး လွမ်းတဲ့စိတ်ကလေး ကို မေ့ ပစ် ဖို့
စူးစူးစိုက်စိုက် ကြည့်နေပေးရုံလေးပါပဲ ။ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးပါပဲ
သူများကိုလည်း အားကိုးစရာ မလိုဘူး… အခုလုပ်ရင်အခုစိတ်ချမ်းသာမယ်..
(သေချာစဉ်းစားနော်…….. စိတ်ချမ်းသာမယ့်အချိန်ဆိုတာ အခုပါ………..
နောက်နေ့မှမဟုတ်ဘူး… အခု လက်ရှိအချိန် မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးအကြီးဆုံ
ရေးထားတာကိုတော့ နှစ်သက်ပါတယ် … ကူးပြီးတော့ မဝေချင်ပါဘူးနော် … ယူတို့ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းရေးတဲ့စာမျိုးမို့လို့ပါ
Ning ဆိုဒ်တွေ ကလေ..ကူးတင်ရင်..သူ့ တို့ ရေးသလိုလိုဘာလိုလို..ရေးကြလို့ ပါ..။
စိတ်ညစ်လိုက်တာ သိန်း ၁၀၀၀ ထီဆုကလည်းမပေါက် ထီဘိုးလည်းကုန် .နောက်ဆုံးဆေးလိပ်သောက်ဘို့ချန်ထားတဲ့ ငွေယားလေးတောင် ပေါက်စဉ်ဘိုးနဲ့ ကုန်သွားတယ်
ရော့ 200 ကားခ
စမ်းကြည့်တာပေါ့ ရွှေအိမ်စည်ရယ်… ဟုတ်လိုဟုတ်ငြား…
စိတ်ညစ်ရင် အိပ်လိုက်.. ပျော်သွားလိမ့်မယ်။
ဒီဆိုဒ်ထဲကလူတွေများ ကူးပြီးတင်တဲ.သူတွေကျနေတာပဲ ပြောပုံက
ဘယ်သူမှ ကော်ပီ ကူးပြီးမတင်ဘူး
ကျွန်တော် တစ်ယောက်ပဲ တင်တာပါဗျာ တခါတလေ
လု လူ လူး
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မေတ္တာထား လိုက်ပါ။
ဒါက ” Anyway “ကဗျာ ကို ဘာသာ ပြန် ထား တာ ပါ ။ တ ကဲ့ မူရင်း ရေးသူ က Kent M. Keith လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ Mother Teresa နဲ့ဆက်နွှယ်သွား လို့ကဗျာ နံမယ်ကြီးသွား တာ ပါ ။ဘယ်သူ ဘာသာပြန် ထားလဲ ဆိုတာ ဖော်ပြနိုင် ရင်ကောင်း မယ် ။ shweaeimsi ပြန်တာလား ဟင် ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ အလေးမထားခဲ့ မိဘူး…
စာရေးဆရာဖေမြင့်ရဲ့ စာအုပ်ထဲ မှာပြန်တွေ့ လို့ ကျက်မိတာလေးပါ..
စိတ်ညစ်တဲ့အခါ အရင်တုန်းကတော့ လျှောက်သွားတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရင်ထဲခံစားချက်တွေကို ရေးရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်နေကြည့်မိတယ်လေ…. http://myanmargazette.net/6289/creative-writing လေ့လာမှတ်သားသွားပါတယ်ရှင်။
ရွာထဲလျှောက်လည်တော.ေ၇ခပ်ဆင်းတဲ. မပန်ပန်တို. မမ မနောဖြူတို. မမအိတုန်တို.ရှိတော.